I-Itemoga Wildlife Reserve - I-Letlapa Luxury Chalet - I-Airbnb
I-Itemoga Wildlife Reserve - I-Letlapa Luxury Chalet
Vaalwater, Limpopo, iNingizimu Afrika
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Itemoga Wildlife
U-Itemoga Wildlife Ungumbungazi ovelele
Itholakala esiqiwini esizimele, esisenkabeni ye-UNESCO evikelwe i-Waterberg Biosphere ehlanganisa izindawo ezahlukene ze-Waterberg.
I-scenic Itemoga Wildlife Reserve ihlala izinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane. I-Letlapa Luxury Chalet yakhelwe phezu kwethafa ledwala elinombono omangalisayo we-panoramic phezu kweBushveld enkulu, ebheke ngasekushoneni kwelanga. Kufakiwe enanini idrayivu yegeyimu.
Siqinisekisa ucezu oluyimfihlo futhi oluzolile lwe-African Wilderness.
I-Letlapa Luxury Chalet yakhelwe ethafeni ledwala elinombono omangalisayo we-panoramic phezu kwehlathi elikhulu futhi libheke ngasekushoneni kwelanga. I-chalet itholakala ngokuhlukana nendawo enkulu yokulala, eqinisekisa ubumfihlo nokuthula, elungele umbhangqwana ogubha iminyaka embalwa, i-honey moon, noma nje ukuphumula futhi ujabulele izikhathi ezingasoze zalibaleka ehlathini. Okufakiwe esilinganisweni kuwumsebenzi oqondisiwe endaweni yokulondoloza. I-chalet inikezwe ifenisha yekhwalithi ephezulu kanye ne-antique ngesitayela semvelo sase-Afrika. Inombhede olingana nenkosi, ubude obengeziwe, onenethi lomiyane, indawo yokuhlala enezihlalo ezintofontofo kanye neziko langaphakathi (ushimula), ikhabethe lezingubo, ikhofi netiye, isiqandisi esincane, okomisa izinwele, ukugeza, ishawa yasendlini nangaphandle, imibhede yelanga, indawo yokudlela yangaphandle. , indawo yokucima ukoma (indawo yomlilo engaphandle) kanye nezindawo zokupheka zangaphandle (ngaphansi kophahla). I-chalet inamasimu amabili, womabili azimele kakhulu, anombono omuhle endaweni ebanzi yase-Afrika, enye ibheke ekushoneni kwelanga (enendawo yokucima ukoma), enye ineshawa yangaphandle nemibhede yelanga. Eduze kwe-chalet kunedekhi yokubuka yangasese eyengeziwe futhi ebuka ogwadule lwase-Afrika, lapho ungabona khona izilwane zasendle nezinyoni noma ujabulele imisindo yasehlane lase-Afrika. Ngezindleko ezengeziwe umuntu angakwazi futhi ukuhlela isidlo sakusihlwa sothando ngaphansi kwezinkanyezi. I-chalet inikezwa amandla elanga, ukunethezeka kungagcina imvelo.
I-Letlapa Luxury Chalet itholakala e-Itemoga Wildlife Reserve, emaphakathi ne-UNESCO evikelwe i-Waterberg Biosphere, cishe amakhilomitha angama-23 ukusuka edolobheni elincane i-Vaalwater, esifundazweni saseLimpopo.
I-Itemoga Wildlife Reserve ihlala izinhlobonhlobo ezinkulu zezitshalo nezilwane ezifana nenyathi yase-Afrika, indlulamithi, idube, inkonkoni, kudu, inhlwathi, inhlwathi, i-waterbuck, i-red hartebeest, nyala, bushbuck, impala, i-mountain reedbuck, i-klipspringer, kanye nezilwane ezidla ezinye ezizulazula ngokukhululeka endaweni yonke njengezingwe, ama-caracal kanye nezimpisi ezinsundu.
Ibungazwe ngu-Itemoga Wildlife
Umhlahlandlela wethu wensimu onolwazi uzonakekela izivakashi zethu. Intengo ye-chalet ihlanganisa umsebenzi owodwa oqondisiwe esiqiwini ngosuku, okungaba umdlalo wokugijima, uhambo lwemvelo, ukuvakasha kwephrojekthi yethu yokuzalanisa izinyamazane ezingavamile noma ukudoba edamini lethu (Black Bass).
I-chalet yakho izohlinzekwa nsuku zonke.
Umhlahlandlela wethu wensimu onolwazi uzonakekela izivakashi zethu. Intengo ye-chalet ihlanganisa umsebenzi owodwa oqondisiwe esiqiwini ngosuku, okungaba umdlalo wokugijima, uhambo…
UItemoga Wildlife Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Vaalwater namaphethelo